Porn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ (2013) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
သငျသညျ porn မရှိအထူးသဖြင့်ကန့်ကွက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချစ်ပြီး he နှစ်ပေါင်းအကြီးအကျယ်သုံးပြီးပြီးနောက်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအရှုံးမပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်ကသူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျ5နည်းလမ်းတွေနေသောခေါင်းစဉ်:
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်၊ ညစ်ညမ်းမှုသည်အတိတ်ကအန္တရာယ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ သင်နားလည်လိုလျှင်အမျိုးအစားများကိုကြည့်ရှုပါ ပြဿနာများသည်အသုံးပြုသူများအစီရင်ခံစာထိုကဲ့သို့သောဒီတော့ထွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, Moody နှင့် morphing လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်။
စွဲလမ်းနေသည့် ဦး နှောက်ဖြစ်စဉ်အကြောင်းဖတ်ရှုခြင်းကသူ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုကျွန်ုပ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစော်ကားမှုမဟုတ်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာသူဟာအမှန်တကယ်အခြားအမျိုးသမီးများထက်နောက်မှသူအမြင့်ဆုံးပါပဲ။
porn ထဲက, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာဟောင်းအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ ebook ebook တစ်ခုကဤရောဂါလက္ခဏာများနောက်ကွယ်ရှိအရာများအကြောင်းရှင်းပြသည် TEDx ဟောပြောပွဲ။ အဆိုပါ Porn ဆလိုက်ရှိုးစီးရီးတွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် ပိုပြီးအသေးစိတ်ပေးထားပါတယ်။ (ဒါ့အပြင်အခုအသစ်တွေ့မြင်, တိုတို, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသောဗီဒီယို porn စွဲ၏သိပ္ပံပေါ်။ )
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကမင်း၌ရှိရန်ကံကောင်းသည်။ သို့သော်သူ၏နေ့စဉ်ပြင်ဆင်မှုကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်သူ့ဘဝတွင်အခက်ခဲဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါသူသည်မိမိအဘို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပေမည်။ မိတ်ဖက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ လူတစ် ဦး ၏အကြံဥာဏ်မှာ -
စွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုတတ်သည့်အကျင့်ရှိခြင်းသည်စွဲလမ်းသူအသုံးပြုသည့်မည်သည့်နည်းတူမဆိုသူ့အတွက်များစွာနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူကဆက်နွယ်မှုကိုမကူညီဘူးလို့နားလည်တယ်လို့ပြောရင်တောင်မှသူကသူကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးနေသလိုခံစားရပြီးသူဟာမဆိုးဝါးတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုဆက်ပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်သွားမှာပါ။ သူ့ကိုခြိမ်းခြောက်သည်ဟုခံစားရသည့်နည်းဖြင့်မလာရန်ကြိုးစားပါ။
နောက်ပြissueနာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ မင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာဘယ်လောက်အထိလိင်ဆက်ဆံတာလဲ အိပ်ခန်းထဲတွင်ချိတ်ဆွဲထားခြင်းများရှိပါသလား၊ သင်သိသောအရာများကသူအားစွမ်းဆောင်ရည်အားစိုးရိမ်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်မည်လော။ လူတို့သည်မိမိတို့စက်ကိရိယာများကို“ လေ့ကျင့်ခန်းများ” နှင့်ကျန်းကျန်းမာမာထားရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်သောကြောင့်လူအများစုကအကြိမ်ပေါင်းများစွာ fap ။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်လျင်မြန်စွာသုက်မပြေးရန်အတွက်လိင်မတိုင်မီထိုသို့ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ သူနဲ့သူဆက်ဆံရေးဘယ်လိုရှိသလဲ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစကားပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါကသူသည်အကျင့်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသင်၏စွမ်းအင်အားလုံးကိုသင်၏လိင်ဘ ၀ တွင်မြှုပ်နှံလိုလိမ့်မည်။
သူ၏ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်သန္နိdetermination္ဌာန်ကိုလေးစားပါ။ စွဲလမ်းမှုကို“ လိမ္မာပါးနပ်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်ခြင်း” အဖြစ်မှန်ကန်စွာဖော်ပြထားသည်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ဒီမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ပြောတာက
WE ကထိုက်တန်သူဖြစ်ကြောင်း၊ သူမကကျွန်မဟာအရမ်းကိုလိင်ခြားသူလို့ထင်နေတယ်ဆိုတာသတိပေးပါ။
ယောက်ျားတွေရဲ့အမှန်တကယ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုကြည့်ပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနောက်ဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာတယ်၊ သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုပိုပြီးစွဲဆောင်မှုရှိပုံ၊ ရင်းနှီးမှုဘယ်လောက်ပိုရတယ်၊ Porn အပ်သူကားအဘယ်သူယောက်ျားတွေ: လိင်နှင့် Romance တွင် လွန်း, ဆောင်းပါးအောက်ရှိပို့စ်များကိုဖတ်ပါ။ သငျသညျအံ့သြကြလိမ့်မည်။ ဤတွင်နမူနာမှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
ငါလွန်ခဲ့သောတစ်ပါတ်ကတည်းက fapped ကြပြီမဟုတ် (sex- အစစ်အမှန်, ထိုအချိန်မှစ။ သုံးကြိမ်မြောက်) ။ - ကန ဦး တုန့်ပြန်ချက် - HOLY SHIT ဤသည်မှာယခုပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ သင်၏လက်သည်သင့်ကိုအိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် 'ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း' မဟုတ်၊ [လိင်ဆက်ဆံခြင်း] ကဲ့သို့သောခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်မတူပါ။ ငါမကြာသေးမီကကြုံတွေ့ရစဉ်ကသူသည်လှပသော (အလိုအလျောက်ပေါက်ကွဲထွက်ခြင်း) ဖြစ်ကြောင်းငါ့ SO ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမ၏တုံ့ပြန်မှုမှကျွန်ုပ်သည်ဤသို့သောအရာများကိုမကြာခဏမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ငါသူမရင်းရင်းနှီးနှီးခံစားရသည်
ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်၌ချိတ်ဆက်မှုအချည်းနှီးရှိခဲ့သည်။ အတင်းအဓမ္မ, မကျေနပ်မှု, အော်ဂဇင်န်းကျင်ဗဟိုပြု။ [ပြီးခဲ့သည့်ညက] နူးညံ့သောကြင်နာမှုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝမတူပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သဘာဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊
ငါမနေ့ကညီလာခံကနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းမော။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမျှော်လင့်မထားတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုအတွင်းပိုင်းသိုလှောင်ကန်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ လိင်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်၊ အသည်းအသန်နှင့်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ရှိသကဲ့သို့တဖန်ခံစားခဲ့ရသည်။ ဤကဲ့သို့သောအချိန်များ၌လိင်ဆက်ဆံရန် ၅ နှစ်“ ငြီးငွေ့လွန်း” ပြီးသည့်နောက်ယခုပြproblemနာသည်ဓာတုဗေဒနွမ်းနယ်မှုမဟုတ်ပါ၊
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှပင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သောလိင်၌အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုနုတ်ထွက်လိုက်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်နှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ငါတို့အချင်းချင်းနမ်းတာနဲ့ထိမိတာနဲ့သူမကိုထိုးဖောက်ဖို့ကျွန်မရဲ့တွန့်ဆုတ်မှုကိုမတွန့်ဆုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာအရမ်းသဘာဝကျတယ်၊ ကျွန်မရဲ့လိင်တံရဲ့အာရုံခံစားမှုကကျိန်းသေပြန်လာပြီ၊ ပြီးတော့ငါလာမယ့်အရာတွေရှိတယ်။
ဒီနေ့ (PMO မဟုတ်သည့်နေ့ ၄၅) သည်ငါတို့၌လိင်ရှိသည်။ အံ့သြစရာကောင်းသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်မျက်စိ၌ကြည့်နေသူဖြစ်သည်။ မညစ်ပတ်ဘူး လှသောအဆင်း။ သူကအဆုံးသတ်မှာသူကတစ်ချိန်လုံးနီးပါးပစ္စုပ္ပန်နေ၏ဟုပြောသည်။ ငါသည်ဤသူသည်သူ၏ပြန်လည်စတင်ရန်မှစတင်သည်ကိုငါသိ၏။ သူအရမ်းပျော်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်တစ်နေ့တာကိုစတင်ရန်အသင့်ရှိနေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ ၎င်းသည်ထောက်ပံ့ခြင်းစနစ်ဖြစ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ထိုက်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေကမ္ဘာပေါ်မှာအားလုံးဂုဏ်အသရေကိုပေးတော်မူ၏။ မင်းကအားကောင်းတယ် သင်ဟာတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်တယ် သင်နိုင်လိမ့်မယ်။
တစ်ဦးဖြစ်သူအသုံးပြုသူအလွန်အကျွံအင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို reverse ရန်အဘို့အဒါဟာလပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါသည်။ ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, လိင်စဉ်အတွင်း arousal မရှိခြင်း) နှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြတ်သောသူတို့အား (စိတ်ပျက်စရာအရသာမှတင်းမာမှုပိုလက်ရှိမိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်ခံစားရရန်အလိုဆန္ဒ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှဖြတ်သူတွေကို: အုပ်စုနှစ်စုသို့သူများသည်ပြန်လည်ထူထောင်ကျဆုံးခြင်း , ဦးနှောက်မြူ) ။
နက်နဲသောအရာ, porn-related ED နှင့်အတူငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေလေ့ ပိုပြီးတဖြည်းဖြည်း recover အဟောင်းတွေယောက်ျားတွေထက်။ ဒါဟာအမြန်နှုန်းမြင့် porn သည်ထိပုတ်ခြင်းရှိမရှိ၏ function တစ်ခုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် သူတို့ရဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း (ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ)။
ပုံမှန်အားဖြင့် (ED, DE ရှိသူများအတွက်) ပြန်လည်နာလန်ထူမှုပုံစံသည်တစ်ပတ် (သို့) ၂ ရက်အရောက်တွင် (မထွက်ခွာမီထက်ပိုမိုမြင့်မားသော) အရူးဖြစ်သွားသည်။flatline။ " ယောက်ျားများသည် Flatline ကို“ လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုခြင်း၊ အသက်မဲ့သောလိင်အင်္ဂါများနှင့်နံနက်သစ်သားများမရှိခြင်း” ဟူ၍ ဖော်ပြလေ့ရှိသည် - တစ်ခါတစ်ရံတွင်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်လိုက်ပါသွားတတ်သည်။ အဆိုပါလိုင်းလအနည်းငယ်စုံလင်ခြင်းနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာပါ တစ်ဦး9လနာလန်ထူဖော်ပြကောင်လေး။ သူအပြုအမူတွေကသူ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှေးကွေးရာကရှင်းပြသည်။ 2-6 လအတွင်းသို့မဟုတ်ကြာကြာတစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူကာလကိုမျှော်လင့်။
ကျွန်တော့် GF နဲ့ကျွန်တော်ဟာ ၂-၃ လလုံးလုံးလိင်မဆက်ဆံခဲ့ကြဘူး။ ဆက်ဆံရေးဟာသေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြေအနေကမလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ ငါဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကန ဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုအသစ်ပြန်စလာတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာငါနဲ့အတော်လေးကြာရှည်ခဲ့တဲ့အပြားပြားအချိန်ကာလနောက်ကိုလိုက်တယ်။ GF နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပိုမိုကျန်းမာပြီးတစ်ချိန်လုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
မရတိုင်းကောင်လေးဒီ unnerving flatline, ဒါပေမယ့်အားလုံးနီးပါးအစီရင်ခံစာတွေ့ကြုံ အချို့သော မနှစ်မြို့ဖွယ်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေ။ ပုံမှန်ရောဂါလက္ခဏာများပါဝင်သည်: အိပ်မပျော်, ယားယံခြင်း, ဦးနှောက်မြူ, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, နာမငြိမ်, စိတ်ကျရောဂါ, ခွဲထုတ်ဖို့အလိုဆန္ဒနှင့်သင်တန်းမတရားသော၏။ သင်သည်များစွာသောဖတ်ရှုနိုင်သည် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ Self-အစီရင်ခံစာများ။ ပထမဦးဆုံးအနှစ်ပတ်အတွင်းအဆိုးဆုံးဖြစ်ဟန်ပေမယ့်တည်ငြိမ်ရန်သူ၏ခံစားချက်အဘို့နှစ်လသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာမည်။
porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမရှိဘဲယောက်ျားတွေတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြန်လည်နာလန်ထူစဉ်အတွင်းချစ်ခင်လိင်ရှိသည်ဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသူများကသူတို့ကိုနှိမ့်ချနှေးကွေးရှာပါ။ သူတို့အော်ဂဇင်ကိုရှောင်ကြဉ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်သဘာဝကျကျ reawakens သည်အထိ ED နှင့်အတူ Young ကယောက်ျားတွေနီးပါးအမြဲပိုမြန်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခြုံငုံလမ်းကြောင်းသစ်အပြုသဘောပင်သော်လည်း, သူတစျနေ့ကကောင်းစွာလုပ်နေတာနဲ့နောကျပုပ်ခံစားရစေခြင်းငှါ, ဆိုလိုတာက linear မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရှည်ပါ။
4. သင်၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်မှုရှိနေပါစေ၊
သင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းသူပြန်လည်နာလန်ထူလာချိန်တွင်သူ၏လိင်စိတ်ကရက်သတ္တပတ်များစွာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားစေနိုင်သည်။ ဒီဟာမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ၎င်းသည်သူ၏ ဦး နှောက်၏လိင် / အစာစားလိုစိတ်စင်တာများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအပြောင်းအလဲများကိုကုသခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ သင်၏ဆွဲဆောင်မှုကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ယုံကြည်မှုဖြင့်စောင့်ပါ။
အစဉ်အလာအရအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးသည်လိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်းကိုမြင့်တက်စေခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှေးကွေးမှုကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ လိင်မှုကိစ္စမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှထွက်သောယောက်ျားအများစုတွင်ပြproblemနာမှာပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာအပျော်အပါးများအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့်နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးများကိုထုံထိုင်းစေသည်။ သူတို့လုပ်ဖို့လိုတယ် reboot လုပ်ပါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတောင်းဆိုချက်များကို၏အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သူမသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သူမကိုမပါဘဲဤအရာများကိုမည်သည့်အခါမျှဖြတ်သန်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ ငါကခက်ခက်ခဲခဲနေဖို့ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပုံကိုသုံးမယ်၊ သူမငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသုံးတာထက်ပျော့တာပဲလို့ပြောတယ်။ အဲဒါကိုသိခြင်းကပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ်၊ ​​ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကြောင့်ငါတောင်မှ porn အကြောင်းတောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ သူမကကျွန်တော့်ကို ED ဆေးတစ်မျိုးမျိုးသောက်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော့်ကိုဒီဆေးကိုသဘာဝကနေခွဲထုတ်ချင်တယ်။ ဒီမှာကျွန်တော်အကြံဥာဏ်ပါ
1 ။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြောဆိုပါ။ ဒါဟာဝေးနေဖြင့်အကြီးမားဆုံးအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ သင်၏အချိန် ယူ. သင်နှင့်အတူအဆင်ပြေများမှာတစ်ဦးအရှိန်အဟုန်မှာသွားပါ။
3 ။ ဖြည့်စွက်အဘယ်အရာကို-ဒါ-အစဉ်အဆက်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။
Funnily အလုံအလောက်, ငါ့ရည်းစားတစ်ဦးအနေဖြင့်နောက်ကျောသိပ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သာမိန်းကလေး-on-မိန်းကလေးအရေးယူသူမကမှာအားလုံးလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ပါသော်လည်းသူမ၏စိုစွတ်သောအရလိမ့်မယ်လို့ရှာဖွေတာတက်အဆုံးသတ်တစ်ခုအလားတူအဆင့်ရှောက်သွားလေ၏။ ဒါကြောင့်သူမလည်းညစ်ညမ်းအရှုံးမပေးခဲ့ကြရသည်။ ကျွန်မသူမအပြည့်အဝငါမှတဆင့်သွားခဲ့ရာနားလည်သဘောပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအခြို့သောလမ်းအတွက်, ငါ့အဘို့ကောင်းသောခဲ့ပုံပါဘဲ။
သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့မှာအားနည်းချက်တချို့ရှိတယ်။ သူမမှာလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်။ ငါဟာမလွယ်ဘူး၊ အသုံးမ ၀ င်ဘူးလို့ခံစားရတဲ့ညနေခင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့အချိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောပြီးပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့တယ်။ ဒီနောက်ဆုံးစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာငါလိင်ဆက်ဆံဖို့ခက်ခဲပြီးဆက်နေနိုင်ခဲ့တယ်။ ဤသည်ငါ့အဘို့ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါကြီးမားဆိုလို။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လိင်ဆိုင်ရာစွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခု၏အစဖြစ်သည်။ ငါသာပိုကောင်းလာမယ့်သေချာပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုကအများကြီးပိုအားကောင်းနေပြီ။
အော်ဂဇင်သိသာချွတ်သတ်မှတ်လျှင်သူသည်ပြန်လည်ထူထောင်နေစဉ် neurochemical ဂယက်ထ သို့မဟုတ်ပင်သူ့ကိုပို့ပေး ကျောတစ်မူးရူးသို့ပြီးအောင်သူ့ကိုမတွန်းပါနဲ့ သူ၏ ဦး နှောက်သည်သဘာဝအားဖြင့်သိသိသာသာမြင့်မားသောအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါလိင်လှုပ်ရှားမှုအားနူးညံ့။ အနိမ့်သော့ခတ်ထားပါ။ (porn-related ED နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကို ဦး နှောက်၏သိပ္ပံပညာအတွက်ကြည့်ပါ။ ) Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn ဗီဒီယိုစီးရီး) ။ ၎င်းသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းသူ၏လိင်ဆန္ဒကိုဖြုန်းတီးရန်ကြိုးစားခြင်းထက် ပို၍ လိုချင်သည်များကိုထားခဲ့ခြင်းသည်ပိုကောင်းလေ့ရှိသည်။ (ကျန်းမာသောအမျိုးသားများပင်လျှင်အကျိုးရှိနိုင်သည် က overdoing မဟုတ်.)
အတိုချုပ်ပြောရရင်သူ့ကိုအချိန်မတန်မီအပူပေးဖို့ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်ကိုမကစားပါနဲ့။ သင်၏ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်စွမ်းရည်များသည်ရေတိုတွင်လိုချင်သောမီးရှူးမီးပန်းများထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သူသည်သူ၏ကုသမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ဆုံးရှုံးသွားသောအချိန်ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်းသူသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းဤနိမိတ်လက္ခဏာများကိုသတိထားပါ နောက်ကျောကိုခြေရာခံပေါ်မှာ.
စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်လိင်ကိစ္စသည်သင့်လက်တွဲဖော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်းပုံမှန်ချစ်ခင်မှုသည်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ နေ့စဉ် Bond အပြုအမူတွေ သူ့ဦးနှောက်ကပုံမှန် sensitivity ကိုပြန်သွားဖို့အတှကျအသငျသညျစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းရဲသင်သည်နှစ်ခုစလုံးထိန်းထားနိုင်တယ်။ နှစ်ခု porn အသုံးပြုသူများကိုပြန်လည်ထူထောင် said:
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုကူညီပေးသည်တတ်နိုင်သမျှနူးညံ့သောအထိအတွေ့နှင့်နမ်းသည်။ ငါပြင်းထန်သောစိုးရိမ်သောကမှပင်ဆင်းရဲ, သူ့သို့မဟုတ်သူမ၏ဒါငြိမ်းစေလျက်ရှိပါသည်ငါ့ကိုထိထိ။
ဒုတိယအကောင်လေး: ငါဟာအမြဲတမ်းမိန်းမတွေ၊ အတော်အသင့်လူမှုရေး၊ ပျော်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် porn နဲ့ငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်ကအရမ်းကြီးလွန်းပြီး၊ နေ့စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (တစ်ခါတစ်ရံ ၅ ကြိမ်အထိ) အကြိမ်ကြိမ် tabs ပေါင်းများစွာကြာလေ့ရှိပြီးကျွန်တော့်ဒစ်သည်မရှိခြင်းနှင့်ငါ့ ဦး နှောက်သည်အရူးကဲ့သို့လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်အထိ။ ငါလူပျိုလား မဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးကအမြဲတမ်းလိင်မှုကိစ္စကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပေမဲ့သူမသွားတဲ့အချိန်မှာ porn နဲ့တကယ့်“ အလျင်အမြန်” ရဖို့အတွက်ငါသာ orgasm အတုလုပ်လိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်ကသူနှင့်ကျွန်တော်အော်ဂဇင်တလုံးရှိခဲ့ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်နာရီအကြာတွင်သူမအိမ်မှထွက်သွားပြီးနောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထို့နောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်ရည်းစားပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အိပ်ရာပေါ်မှာသူမမြူနှင့်တူလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကတခြားပုံရိပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ အိပ်ချင်နေခြင်း၊ ပျက်ကွက်ခြင်းစသည်၊ ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်နှင့် ၁၀ မိုင်အကွာတွင်ရှိနေသကဲ့သို့ ED သည်ထိမှန်ခဲ့သည်။
ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အခြားအချစ်ဆုံးဇာတ်လမ်း၊ ကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးကိစ္စကိုရပ်တန့်ရန်မလိုချင်ပါ! ဒါကြောင့်သူမကြိုးစားရင်းနဲ့စိတ်ကူးယဉ်နေတုန်းကျွန်မရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ စိတ်တိုလာတယ်၊ ငါဟာပူဖောင်းတစ်မျိုးမျိုးမှာနေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ED ကပိုဆိုးလာတယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်တွေတောင်မှမလုံလောက်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါအဖြေတစ်ခုကိုရှာခဲ့တယ်။ ခရီးစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်2ရက်, ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ flatline များအတွက် horny ခံစားရတယ်။ ငါတနေ့လုံးအိပ်နေခဲ့ပြီ၊ သေပြီမို့စသည်စတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိတဲ့ငါ့ရဲ့မိန်းကလေးနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။ တစ်ပါတ်အကြာတွင်, ငါ့ရည်းစားကိုနောက်တဖန်အမှန်တကယ်ကြည့်ဖို့စတင်သူမကငါ့ကို resensitization ကူညီပေးသည်အနှိပ်ပေးခဲ့တယ်။ ငါရက်သတ္တပတ်များနှင့်လပေါင်းများစွာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မနေ့ကကျမတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်းသူမကကျွန်မကိုစနမ်းလာတယ်။ ငါခက်ခဲခဲ့တယ်၊ ငါကမတူကွဲပြားတဲ့စိုက်ထူမှုတစ်ခု၊ စိုက်ထူမှုဟောင်းတစ်ခု၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးနိုးကြားနေပြီးဘာကိုမှန်းဆမှန်းငါသိတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ED မပါဘဲ၊ စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးသူမရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူသစ်တစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါတောင်မှလူသစ်တစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ လိင်ဟာမြူခိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ အော်ဂဇင်တောင်မှတောင်မှငါဟာစိတ်ကျေနပ်မှုရရုံသာမကဝမ်းနည်းစရာလည်းမရှိခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော့်ဇနီးကသူမကိုယ်သူမတတ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှကူညီပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်ဒါကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဆိုလိုပါ။ ငါသူမပြောနေတာမှသူ့ကိုယ်သူပွင့်လင်းစေသည်ဆိုလို။
နောက်ထပ်ယောက်ျားသည်လည်းမိမိ porn အလေ့အထနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ၏ဇနီးနှင့်အတူစကားပြောပြီးနောက်ဒီ wrote:
သူမသည်၎င်းကိုလက်ခံပြီးအလွန်အထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်၊ မည်သည်ကိုမျှော်လင့်ရမည်ကိုများစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါအရမ်းနားလည်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမကကျွန်မကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ သူကကျွန်မအတွက်ဆွဲဆောင်မှုသိပ်မရှိဘူး၊ ပြီးတော့ပြီးတော့သူမကိုပြခဲ့တယ် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု Liz Hurley ကိုလှည့်စားခဲ့သူ Hugh Grant အကြောင်းကိုအမှတ်ရပြီးနောက်ဆုံး၌သူသည်ဆွဲဆောင်အားကိုနားလည်လာသည်။ ဟောပြောချက်ပြီးတဲ့နောက်ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအရင်ကထက်ပိုပြီးနီးကပ်လာပြီလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ဘယ်လောက်အထိသက်သာသွားတယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူး။
သူ့ကိုဆွဲဆောင်မှုခံစားရစေသည် Flirty အပြုအမူကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုများ၏အပျော်အပျက်ဘက်ပေါ်တွင်သင်၏ flirtation စောင့်ရှောက်လော့။
အပိုဆုအစွန်အဖျား: Non-ရည်မှန်းချက်-oriented လိင်ဆက်ဆံမှု Explore
အဲဒီအစားသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပျက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေလျှော့ဖို့ကြိုးစားနေထက်, ဒါမှမဟုတ်ပါးစပ်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ် orgasm ကနေတဆင့်, အဘယ်ကြောင့်နည်းနည်းအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်များနှင့်အတူစမ်းသပ်မဟုတ်လော တချို့အမျိုးသမီးတွေနောက်ဆုံးတွင်လိင်ကစားစရာများနှင့်ညစ်ညမ်းနေတဲ့အချိန်ကုန်ကွောငျးတှေ့ သူတို့ရဲ့အာရုံငါးပါးပျော်ရွှင်မှုတိုးပွါး များလွန်း။ သင်တို့သည်လည်းတချို့ရှေးခေတ်တစ်ကိုယ်တော်အလေ့အထများနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့လိုပေမည် သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုမှေးမွူ သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင့်ခံစားချက်တည်ငြိမ်ရန်။
သငျသညျနှစ် ဦး စလုံးရဲရင့်ခံစားနေလျှင်စူးစမ်း karezza (Non-ရည်မှန်းချက်-oriented လိင်ဆက်ဆံမှု) သို့မဟုတ် နူးညံ့သိမ်မွေ့ tantra အတူတူ။ သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သင့်မိတ်ဖက်၏ပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည် မည်သည့် neurochemical ဂယက်ထမပါဘဲ အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်။ ဤတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်း၎င်းကိုစမ်းသပ်နေသောလူနှစ် ဦး အကြားဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၂၀ ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏သမီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြုပြင်ထားသော Karezza (သူမပြီးဆုံးသွားပါပြီ) လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တစ်နှစ်တာဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံးလိင်မှုအချို့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ငါမတိုင်မီငါအားနည်းနေစိုက်ထူရှိသည်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြီးသွားအခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်လို့ယခု, ယခုငါရေငုပ်သင်္ဘော၏ကိုယ်ထည်ထဲမှာအပေါက် *f* ck နိုင်, ငါအဆက်မပြတ်ဖို့ရှိခြင်း ငါ၏အတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားကွေး ပြီးသွားမှရှောင်ရှားရန်။
ဒုတိယအကောင်လေး: ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ငါပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်အရမ်းထိတ်လန့်သွားတယ်။ ငါအချိန်တိုင်းပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်၊ သူမထက်ဝက်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုငါမပြီးသေးဘူး ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးမစတင်မီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်ယုံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
သင်တို့သည်လည်းလိင်စဉ်အတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအော်ဂဇင်ကိုတက်ဖြတ်သန်းနှင့်အတူလှည့်ပတ်ကစားရန်လိုပေမည်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေကြောင့်နောက်ဆက်တွဲချွတ်ဖုိ့ကူညီပေးသည်ကိုရှာဖွေ စိတျအပွောငျးအလဲ.
မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု, ပြန်လည်နာလန်ထူသငျတို့နှစျယောကျကို non-performance ကို oriented လိင်ဆက်ဆံမှုစမ်းသပ်ဖို့တစ်ခုစံပြအခွင့်အလမ်းရှိသည်သောကာလအတွင်းထူးခြားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ယောက်ျားကအလွန်အသုံးဝင်သော tool တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြော တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲကျော်လွှား၌တည်၏။
You နှစ်ဦးစလုံးသငျသညျအတူတူဒီအတွေ့အကြုံကိုရှောက်ဝမျးသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူကဲ့သို့သောစိန်ခေါ်မှုမျှဝေခြင်းယုံကြည်မှုနှင့်စစ်မှန်တည်ဆောက်။ သငျသညျအခါသင်မှပြန်လာကြလိမ့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်ယခုပေးသောအထောက်အပံ့၏စဉ်းစားပါ သငျသညျ အကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်အပိုနားလည်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ (သိသာထင်ရှားတဲ့, အမျိုးသမီးများမှာလည်းသည်းခံခြင်းနှင့်နားလည်မှုစဉ်လိုအပျသူမြားဖွစျစနေို သူတို့ ဒီနေ့ရဲ့ခေါ်ဆောင်သွားသွေးဆောင်မှုကနေ unhook ။ ယောက်ျားတွေ, စိတ်ရှည်ပါ!)
ဆက်ဆံရေးအဖိုးတန်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအဘယ်သူ၏လိင် kilter ထဲကယာယီခဲ့ကြသည်တခဲ့ကြလျှင်သင်ကုသခံရဖို့လိုအဖြစ်သင့်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံပါ။ သငျသညျအမျက်ထွက်ခံစားချက်တွေကို process ဖို့လိုအပ်ပါက, ပြုပါ အပြင်မှာ ယုံကြည်ရသောတိုင်ပင်သူနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေး။ သူအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေသည်၊ သူသည်ရဲရဲရင့်ရင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုယုံကြည်ပါ။ (အကယ်၍ သူသည်မကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြုမူခဲ့ပါကဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အသင့်ရှိပါ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်သူ၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးစွဲလမ်းသူများစွာရှိသည်။ ထင် သူကဆုတ်ခွာ၏နာကျင်မှုရင်ဆိုင်ရဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိသည်ရှေ့တော်၌ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်လိုသည်။ )
မိမိအလိင်စိတ်ကိုတဖန်ဝင်သွားပါသည်အချိန်မှာတောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြောင့် lovemaking ထိန်းညှိရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးမှာလွယ်ကူသောကြောင့်ယူပါ။ (ကြည့်ရှုပါ အသက် ၂၁ - ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်နှေးကွေးသွားနိုင်သည် (ED) ။လိင်ဆက်ဆံမှုပုံထဲသို့ဝင်သောအခါ) အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်နှစ်ဦးစလုံးအဆန်းမဟုတ်ပါ။ ယောက်ျားတွေလကြာတိုးတက်မှုကြည့်ဖို့ဆက်လက်။
ဒီမှာ YOUTube ရှိတယ် PIED ရှင်းပြဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အတူအင်တာဗျူး.
ဒီနေရာတွင်စုံတွဲတစ်တွဲသည် reboot ဖြစ်သည့် account တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက် ၂၃ - (ED) ယောက်ျားနှင့်သူ၏ရည်းစားနှစ် ဦး စလုံးသည်ရက်ပေါင်း ၁၃၀ အား reboot လုပ်သည်ဟုဖော်ပြသည်
ဒီမှာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်တိုတိုလေးပါ။ (၂၃) နှစ် - ED: နေ့များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ယခင်ကထက်ကျော်လွန်နေပါသည်
ဒါ့အပြင်“ ကြည့်ပါ။အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအမျိုးသားများအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကွောငျးတှေးတောဆငျခွနဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကကောင်းသောအရာပါပဲ"(အမျိုးသမီးကဆောင်းပါး) ။
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုPorn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ (2013)"
01 မှာ 30 / 2013 / 1: 15 နံနက်
02 မှာ 11 / 2013 / 1: 30 နံနက်
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ BF နှင့်အတူ4နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်မပြည့်ခင်စကားမပြောခင်သြဂုတ်လမှာငါတို့မကြာသေးခင်ကပဲပြန်ပေါ်လာတယ်။ ကျနော်တို့ txt မှတဆင့်စကားပြောခဲ့ပြီးတစ်ချိန်မှာ txt မှတဆင့်တော်တော်လေးပူပြင်းလာပြီးသူကငါ့ကိုလိင်ဆက်ဆံရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ငါငြင်းဆန်ခဲ့သည် ... ဒါကငါလုပ်ချင်သောပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကျဆင်းနေပြီးနောက်သူကအကြောင်းအပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရရန်စတင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ဟုပြောသည်။ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်လကြိုတင်သူ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရှုံးမပေးရန်ဆုံးဖြတ်ဟုပြောသည်။
ငါကြင်နာပျော်စရာပွူနှင့်အနည်းငယ်ကပိတ်ထားခဲ့သည်။ ငါကြိုက်တယ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုနေ့စဉ်ပလပ်ထိုးသည်၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုနေ့စဉ်ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ bf သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုသည်ကိုကျွန်ုပ်အမြဲသိသည်။ ထိုအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုမကြိုက်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမိသည်၊ အနည်းဆုံးသူသည်အခြားအမျိုးသမီးများလိုက်စားခြင်းနှင့်လိမ်လည်ခြင်းကိုမပြုပါ။ စဉ်းစားရန်လမ်းမှား! သူကသူ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုမပံ့ပိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော့်ကိုတကယ်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်အဲဒီအချိန်ကသုတေသနပြုဖို့အချိန်ယူပြီးအဲဒါဟာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်။ ဒါကြောင့်ငါသည်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ညစ်ညမ်းသောအရာများမဟုတ်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်ရန်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ငါအထီးကျန်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ငါသူ့ကိုမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ့်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပဲ။ သူဟာတစ်နာရီခန့်အကွာမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၆၀ ကျော်။
အစပိုင်းမှာသူကကျွန်မတို့ကိုလုံးဝမလိင်ဆက်ဆံဖို့အခိုင်အမာပြောခဲ့တယ်၊ ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေလို့ပဲ။ ငါအစဉ်အမြဲဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိင်ဆက်ဆံရန်ထင်? ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆက်ပြောတာကဘာလဲဆိုတာငါဆက်ပြောတယ်။ ဘယ်ငါအခုငါမြင်နေတာဒါမှားယွင်းနေသည်။
ငါလုပ်သောကြောင့်သူ့ကိုနှောင်ကြိုးမခံစားရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသူ့စိတ်၊ သူ့ဟာသ၊ သူငါ့ကိုနားလည်ပုံရပုံကိုချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါက orgasm နဲ့ sex ကိုသိပ်အာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါကငါ့ကိုပဲကြောက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ပုံပါဘဲ။
သူ့ကိုအတင်းဖိအားပေးခိုင်းပြီးငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ လပေါင်းများစွာအကြိမ်ပေါင်းများစွာ။ အစပိုင်းမှာတော့သူကအော်ဂဇင်ကိုမလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့်ငါဒေါသထွက်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါဟာတန်ဖိုးမရှိဘူး၊ သူမလိင်ဆက်ဆံချင်လို့လည်းခံစားရတယ်။ ငါသူစိတ်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပြီးငါ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာပဲလို့ထင်တယ်။
ဒီဇင်ဘာလမှာသူကမိန်းကလေးတွေကိုပိုပြီးသတိပြုမိလာအောင်ပြောတယ်။ နေ့တိုင်းပျမ်းမျှမိန်းကလေးများသည်သူ့ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်ကြပြီးသူသည်နည်းလမ်းများစွာတွင်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်။ သူကသူမသည်အခြားမိန်းကလေးငယ်များ၏စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုစတင်ခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ ငါကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေမယ့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကပယ် brushed ကြောင်းဖတ်ပါ။ သူဟာဒီကိစ္စမှာအပြစ်ရှိတယ်၊ သူကအတှေးအများနှင့်အိပ်မက်တွေအပေါ်သို့ပြုမူသွားခဲ့ကြသည်လျှင်အဖြစ်။ ငါပြောခဲ့တာက "သူတို့ကအိပ်မက်တွေပါ။ ယောက်ျားအားလုံးကတခြားမိန်းကလေးတွေကိုသတိထားမိပုံရတယ်။ မင်းနဲ့ငါအတူတူရှိနေမယ်ဆိုရင်မင်းကိုမင်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုမလုပ်ဖို့တားဆီးသင့်တယ်။ ဒါကမင်းဟာ porn နှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ မင်းကြည့်ရတာ
သူကအသစ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းလုပ်ချင်တာတွေရှိရင်ငါကောင်းကောင်းပြောလိုက်တယ်။ သင်တိုက်တွန်းခံရသည့်အခါကျွန်ုပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ။ ဒီဟာကပြtheနာကိုကူညီတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ site ကိုရှာတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါကမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ဟာအဲဒီနှောင်ကြိုးကိုဘယ်တုန်းကမှမဖန်တီးခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကသိပ်နောက်ကျထွက်ပုံရသည်။
သူနဲ့ငါစကားပြောပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံစောင့်ရှောက်လျှင်, နှင့်လိင်ပိုပြီး raunchy ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကကျွန်မကိုနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ထွက်ကစားခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမလက်ကျင်းပနိုင်ရန်ရှိခဲ့သည်မရှိ cuddling ဆိုနမ်းအနိုင်နိုင်ရှိ၏။ ဒါဟာကိုယ့်ကြမ်းတမ်း, raunchy, kinky လိင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ငါရွံရှာဘွယ်သောခံစားရတယ်။ ဤသည်လအနည်းငယ်အဘို့အပေါ် သွား. သူ့ကိုငါကအရမ်းချစ်ခင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သူအချို့ဆုတ်ခွာပေးရန်စတင်ခဲ့သည်။
တစ်နေ့မှာသူကကျွန်တော့်ကိုစကားပြောချင်တယ်လို့ပြောတယ် သူ၏အိပ်မက်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြာခဏဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကို“ dopamine အလုအယက်” မရှိတော့ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ အဲဒါကိုကြားရတာကကျွန်မကိုအရမ်းနာကျင်စေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့လိင်ကိုအားပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်လိင်ကိုသူ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ပုံဖော်ဖို့ခွင့်ပြုတာကြောင့်ငါအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။
သူကသူနေဆဲပြန်လည်ထူထောင်နေဆဲလား၊ ဒါမှမဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးကနေဒါဏ်ရာရခြင်းလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူးလားဆိုတာငါမသိဘူး။ သူကငါနဲ့အတူနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့ခံစားရပြီးအိပ်မက်တွေကြောင့်ငါ့ကိုလိမ်ပြောလိမ့်မယ်လို့ဆက်ပြောတယ် သူကဆက်ပြောသည်မှာ“ ငါဟာတခြားမိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ ”
သူကဒီနေရာမှာသူမမုန်းဖို့၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်လိုချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကသူ့ ဦး နှောက်တပ်မက်မှုပဲ။ သူကစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းနေသည်ဟုထင်ရသည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုစွဲလမ်းနေတယ်လို့ပြောနေတယ်။
စနေနေ့မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ကြမယ်၊ လိင်ဆက်ဆံမယ်၊ သူအိမ်ပြန်မယ်၊ chaser effect / porn hangover ကိုကြည့်ဖို့ porn ကိုကြည့်မယ်။ ပြီးတော့သူကငါ့ကိုတွေ့ပြီးနောက်တနင်္ဂနွေမှာသံသရာထပ်လုပ်မယ်။
အခုတော့ညစ်ညမ်းမှုမရှိတော့ဘူး။ သူ့အလုပ်မှာနေရာအသစ်နဲ့အတူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မမြင်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလှည့်မယ့်အစား၊
ငါကြိုးစားကြည့်ချင်ခဲ့တယ် Karezza ယခုမူကားသူသည်ငါနှင့်အတူအမျက်ထွက်သည်။ အစပိုင်းတွင်သူကသူသည်သူနှင့်လိင်ကိစ္စစွဲလမ်းနေသူဖြစ်သည်ဟုငြင်းခုံခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူကသူ့ကိုငါပြန်ထားခဲ့ပြီးသူသည်စတုရန်းတစ်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဟုပြောသောကြောင့်သူသည်လိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုနေသည်။ ငါစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခံစားရတယ် ငါဒီစာမျက်နှာကိုရှာပြီးထပ်မံဖတ်ပြီးနောက်၊ ငါပိုပြီးနားလည်တယ်၊ ငါဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတာကိုထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါလို့သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ သူကျွန်တော့်ကိုအရမ်းဒေါသထွက်တယ် ငါသူ့ကိုလွှတ်ခွင့်ပြုသင့်မသင့်လား၊ သူသိသင့်တဲ့အရာဖြစ်သင့်ပေမဲ့ဒီအချိန်မှာသူရူးသွားတယ်။ သူက“ ရှုံးနိမ့်မှု” ကိုကောင်းစွာမယူပါဘူး။
ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိကြောင်းပြောကြားလိုသည်။ အပေါ်ယံအရာများအပေါ်အာရုံမစိုက်၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲမက်ခြင်း၊ မိန်းကလေးများကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိသောကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့သည်။
အကြှနျုပျ၏ BF ယခုသူသည်တကယ်ကြီးစွာသောကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကျွန်တော့်အတွက်အမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တာပါ။ နေအောက်မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော့်ကိုဘာမှလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ သူကအမြဲတမ်းစစ်မှန်တဲ့ပုံပဲ။ သူဟာမိန်းကလေးအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပြီးသူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်အတူရှိနေခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်အလွန်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူဟာချိတ်ဆက်ရုံနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဒါကလိင်ကိစ္စအကြောင်းမဟုတ်တာလားဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ကျောက်တုံးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ချင်လို့ပဲလို့ပြောတယ်။
သို့တိုင်ယခုသူသည်ခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ဘာမှမပြေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ သူ့ကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ငါသူ့ကိုဆုံးရှုံးနေသလိုခံစားရတယ် ဒီဟာကငါတို့အတွက်သိပ်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြီးအကျယ်ပြန့်ပွားစေခဲ့တယ်။ ငါကဒါအားလုံးအကြောင်းစိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်နှင့်ငါအကူအညီမဲ့ခံစားရတယ်။
02 မှာ 12 / 2013 / 10: 19 ညနေ
02 မှာ 22 / 2013 / 10: 38 ညနေ
လွန်ခဲ့သောလေးပတ်ခန့်က၊ ငါ့ရည်းစားကသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြောလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းမလုပ်နိုင်ရင်မင်းမလုပ်နိုင်ရင်မကောင်းဘူးလို့မခံစားရဘူး။
ကောင်းပြီ၊ ၂၁ ရက်ပဲရှိသေးတယ်၊ မင်းကိုပြောခွင့်ပြုပါ၊ လိင်ကအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ သူကအရမ်းယုံကြည်မှုရှိပြီး sexy ကြီးထွားလာသည်။ ငါသူ့ကိုငါ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အာလဖအထီးလို့ခေါ်တယ် အရင်တုန်းကသူဟာသူမထက်လိင်မှုကိစ္စပိုမြင့်မားတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ယခုသူသည်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်တူသည်။ Foreplay အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ သူကကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးအခန်းကပါ။ သူဟာဖွင့်ပြီးငါ့ကိုလှည့်ရတာကိုနှစ်သက်တယ် ငါသိပ်ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး! သူကနည်းနည်းပိုပြီးအထွက်ဆည်းပူးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာညတိုင်းနီးပါးလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူကသူနဲ့ပိုပြီးဖန်တီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ သူ့ကိုငါမထိုးခဲ့ဘူး။ ဒီအရာက…ငါသူ့ကိုမိန်းကလေးတွေပိုပြီးစစ်ဆေးနေတာကိုသတိပြုမိတယ်။ ငါ့ကိုသူနဲ့အတူရှိနေရတာကိုဂုဏ်ယူစေသည်။ သူကကျွန်မကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုလိုလိုလားလားမွမ်းမံထားတယ်၊
(နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်) မင်းရဲ့“ ရိုးရာ” alpha အထီးကိုငါစွဲလမ်းခဲ့တယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်တိတ်ဆိတ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ယခုတွင်မူသူသည်လူကဲ့သို့အမျိုးသားဖြစ်သင့်ပုံရသည် (ဤစကားစုကိုသေချာစွာအသုံးပြုရန်ကြိုးစားနေသည်) ။
သူပြောတာက ED ဆိုတာပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ သူလုပ်သမျှအရာအားလုံး (စကားပြော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အိပ်ရာပေါ်မှာ) ကိုသူယုံကြည်တယ်။ သူအိပ်ရာပေါ်မှာလိုချင်တာကအရမ်း sexy ပါ။ သူကအရာရာကိုအလိုရှိတယ်။ သူ၌“ တာ ၀ န်ယူမှု” သဘောထားပိုရှိသည်။ သို့သော်သူသည်အူကြောင်ကြောင်မဟုတ်ချေ။ သူဟာရုပ်ရှင်တွေမှာမကြိုက်ဘူး - သူဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်တကယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ sexiness ထပ်ထပ်ထည့်ပုံရတယ်။
(ယောက်ျားတစ်ယောက်) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဤမျှလောက်အထောက်အကူပြုသောဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုကြားရတာဝမ်းသာပါသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ကျော်လွှားရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့်သူတို့ဘာသာသူတို့ကတစ်စုံတစ် ဦး သည်ထိုကျွန်၏ကျွန်ဘဝရောက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ မကျန်ရှိသည်ဖြစ်စေသူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကွဲပြားခြားနားချက်တစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်သည်။
(ယောက်ျားတစ်ယောက်) အမျိုးသမီးများအားမိတ်ဖက်များအဖြစ်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်ပညာပေးခြင်းသည်မည်မျှပျော်စရာကောင်းသည်ကိုစဉ်းစားမိသည်။ ပြီးတော့ ED / DE ခံစားနေရတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကြည့်တာကိုကြည့်ရင်သူတို့ကပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံးရည်းစားမှာလည်းပြissuesနာတွေရှိတယ်။ ထို့နောက်သူသည် nofap ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သို့မဟုတ်တီရှပ်များထုတ်ပေးနိုင်သည်။ “ မင်းက Fap မဟုတ်ရင်လိင်ဆက်ဆံတာမရှိဘူး” ဟားဟား!
“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ NoFap ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
02 မှာ 27 / 2013 / 7: 20 ညနေ
ဖိုရမ်တစ်ခုတွင် Guy ၏မှတ်ချက်
03 မှာ 06 / 2013 / 10: 07 ညနေ
NoFap အပေါ်တစ်ဦးက post ကို
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏ PMO စွဲလမ်းမှုအတွက်အွန်လိုင်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်၏ဇနီးကိုပြောကြားခဲ့သည်။ မင်းကြီးမြတ်တဲ့လူတွေအကြောင်း၊ မင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဘယ်လိုအားပေးပြီးအောင်မြင်မှုပုံပြင်တွေကိုငါပြောပြခဲ့တယ်။ သူမငိုချလိုက်သော်လည်းဝမ်းနည်းမျက်ရည်မကျဘူး။ သူမလမ်းလျှောက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောပြproblemနာအကြောင်းကိုသူမကိုပထမ ဦး ဆုံးပြောပြချိန်၌လိုသည်။ သူတို့ဝမ်းသာမျက်ရည်ကျခဲ့ကြပြီးသူမကကျွန်တော့်ကိုပွေ့ဖက်ရန်ကျွန်ုပ်ဆီသို့လျှောက်လာခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့သည်။ Porn ကသင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးရသူများထံမှသွေဖည်စေသည်။ ဒါဟာသင့်ကိုခွဲခြားတယ်။ ငါတို့ဒီမှာဘာလုပ်နေတယ်၊ ​​မင်းကိုအတူတကွခေါ်ဆောင်လာတယ်။
03 မှာ 24 / 2013 / 7: 04 ညနေ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကကျွန်ုပ်ကို NoFap နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခေတ္တခေတ္တအနားယူခဲ့ပြီးမနေ့ကသာဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးအစတွင်သူသည်အတွေ့အကြုံ နည်း၍ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမိမိကိုယ်ကိုသံသယများစွာရှိပုံရသည်။ အဲဒါကိုသူက“ bipolar” ဒစ်ခ်လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ ငါသူ့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့တစ်ခါမှမခံစားရဘူး။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိဘူး၊ ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်ကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ သူ့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။
သူကအကြောင်းရင်းကို PMO အလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်ခြင်း / အလွန်အကျွံနှိုးဆွခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ၃ လခန့်ကြာပြီးနောက် NoFap သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မြည်းနှစ်ရှည်လများအတွက်အပြည့်အ ၀ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။ သူဟာအခုပိုပြီးပျော်ရွှင်နေပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိရမယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြောမယ်။ ဒီနေရာမှာအရင်ကဖော်ပြခဲ့တာသေချာပေမယ့် schlicking (ဒီအသုံးအနှုန်းကိုကျွန်တော်တကယ်မုန်းတယ်၊ ယောက်ျားအများစုအတွက်ကဲ့သို့သင်၏အချိန်ပြီးဆုံးသွားသောအချိန်သည်မည်သည့်အချိန်မျှမရှိသောကြောင့်သင်တစ်ကယ့်ရည်မှန်းချက်ကြီးပါကတစ်မိနစ်အတွင်းသင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာများများစားစားလုပ်နိုင်သည်။ ကျောင်းမှ“ နေမကောင်းသောနေ့ရက်များ” အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်အရက် ၃၀ နှင့် ၃၀ ထက်မကသောအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသောက်သုံးမိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံရှာမိသည်။
ထက်ကတခြား, ကိုယ့်ဒါငါဖြစ်ချင်နိုင်ပါတယ်လိင်ဆက်ဆံပါကယ့်ကိုအခြေအနေက၏ရငျးနှီးထဲကငါ့ကို detaches စဉ်ကယ့်ကိုစော်ကားသော porn စိတ်ကူးဖို့ရှိခြင်းရပ်တန့်ရန်အလိုရှိ၏။
03 မှာ 29 / 2013 / 2: 50 ညနေ
ဤဆောင်းပါးတွင်ပါရှိသော“ စိတ်ပညာယနေ့” ပေါ်တွင်တင်ထားသောမှတ်ချက်
ဘာသာရပ်: ED မကောင်းတာကြောင့်ငါမိန်းကလေးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ကောင်းပြီ။ ဒါကိုမိန်းကလေးတွေရင်ဆိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါတို့ယောက်ျားများသည်လိင်ကိစ္စအလွန်တောင့်တကြောင်းနှင့်ထိုအပြာကြယ်များသည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ ဦး နှောက်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ကြောင်းသူတို့ရုတ်တရက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။
သို့သျောလညျးအကြှနျုပျအချက်စေကြကုန်အံ့။ ငါ ED နှင့်အတူနှစ်ပေါင်းရုန်းကန်နေခဲ့ကြနှင့်သာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်မကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောနိုင်သံသယမှစတင်ခဲ့သည်။
ဒီနှစ်များအတွင်းငါမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီ။ ထိုအခါငါကသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းနှင့်အတူချစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာလည်းသူတို့ခံစားရတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပြshareနာများကိုမျှဝေရန်စာနာစိတ်ဖြင့်နားမထောင်ခဲ့ပါ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်မကပျက်ကွက်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားတို့၏ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်ခံစားချက်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်နေသည်ကိုဖော်ထုတ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမင်းပြောချင်တာက - မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကမင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့ထင်ရင်သူ့ကိုထောက်ပံ့ပါ။ သင် pornstar ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နားထောင်ရုံနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးရမယ်။ ၎င်းသည်ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အထောက်အကူပြုပြီးသင့်အကြားရှိရင်းနှီးမှုအားကောင်းစေသည်။ ဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်နှောင်ကြိုးဖြစ်ပေါ်ရသောကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုစွဲစွဲလမ်းမှုသည်တိရစ္ဆာန်ရုပ်များသာဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ယုံကြည်မှုနှောင်ကြိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအပေါ်တွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလိင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသည်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။
ယခုတွင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပိုမိုသိရှိနားလည်ပြီးအခြားအသုံးပြုသူများ၏အစီရင်ခံစာများအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတစ် ဦး တည်း "reboot" ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါနင့်ကိုကူညီမယ့်ကောင်မလေးရှိခဲ့ရင်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်ငါနဲ့အတူရှိနေစေချင်တယ်။ အရိပ်အမြွက် - ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသော၊
ဒါနဲ့ဆောင်းပါးအမျိုးသမီးတွေအပြစ်တင်အကြောင်းကိုမဟုတျကွောငျးထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီကျယ်ပြန့်ပြဿနာကသူတို့ကိုပိုပြီးသတိထားမိအောင်။ ဒီတော့အကျင့်ကို, သူတို့ကပိုများပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး၌ဤစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
06 မှာ 21 / 2013 / 11: 01 ညနေ
09 မှာ 22 / 2013 / 8: 51 ညနေ
BF ရဲ့ PMO မရှိတော့ဘူး
ဟေး၊ ကိုယ့်ပြproblemsနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးလူတိုင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ရည်းစားကဒီ subreddit ကိုတစ်ခါမှမဝင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒီနေရာကိုရံဖန်ရံခါပုန်းအောင်းနေတယ်။ သူဟာရက်ပေါင်း ၄၀ ကျော်နေပြီး PMO ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ဆိုလိုတာကသူတို့နှစ်ဆယ်ကျော်အစောပိုင်းကစုံတွဲတစ်တွဲအနေနှင့်ငါတို့ဆက်ဆံရေးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျန်းမာပြီးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဘဝကိုရရှိနိုင်တယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူသောမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်သူကလုပ်!
ပံ့ပိုးမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုပေးသောကြောင့်လူတိုင်းအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါတတ်နိုင်ရင်ငါဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုတစ်ခုခုပြန်ပေးချင်ပါတယ်။ အချို့လူများအနေဖြင့်၎င်းသည်စာမူတစ်ပုဒ်ရေးသားရန်သို့မဟုတ်အခြားသူများ၏ရေးသားချက်များကိုဖတ်ရှုရန်အတွက်သာအထောက်အကူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
ဒါပေမယ့်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်စကားပြောချင်တဲ့သူရှိရင် ... ငါဒီမှာပါ။ သူစိမ်းတစ်ယောက်၊ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရှုထောင့်ကိုပေးပြီးသင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေအကြောင်းအနည်းငယ်သိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအားလုံးပါပဲ။ မင်းလိုချင်ရင်ငါ့ကိုစာတစ်စောင်ပို့ပေးပါ
10 မှာ 11 / 2013 / 8: 44 ညနေ
အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် porn အတူတူ
02 မှာ 20 / 2015 / 4: 23 ညနေ
33 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားသည် gf ထံမှအကူအညီရရှိသွားတဲ့
ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်အပေါ်တစ်ဦး / သင့်မိန်းကလေးအတွက်ရတဲ့အကြံပြုပါသည်။ ငါအရှိဆုံးမိန်းကလေးတွေစဉ်းစား
ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းကိုရှာဖွေ porn နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များသတိထားဖြစ်ကြပြီး
သူတို့ကသင့်ကို (ကြီးမားတဲ့) ၀ န်ထုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ အဲဒါကသူတို့ကိုအားကောင်းစေတယ်။
06 မှာ 22 / 2015 / 9: 01 ညနေ
လူတစ်ယောက်ကသူ၏ GF အထောက်အပံ့သည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းရှင်းပြသည်
ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျွန်တော်ချိန်းတွေ့ခဲ့သည်, ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ယုံကြည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့ကျတော့သူမကိုသူမအိမ်ကိုကားမောင်းသွားပြီးကားထဲမှာကျွန်တော်နမ်းလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့နောက်ကျောထိုင်ခုံခုန်တက်ခြင်းနှင့်အမှုအရာစိတ်ဝင်စားဖို့ရဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ဖျော်ဖြေတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ... ဒါပေမယ့်ငါမကျင့်။ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိဟာတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာတယ်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါပါပဲ။ ငါဟာတခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ဆင်တူတဲ့ဆင်ခြေလုပ်မယ့်အစားအားလုံးထဲကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူမကကျွန်မရဲ့ပြproblemsနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတာတွေအကြောင်းပြောပြတယ်။ သူမသည်နားလည်ပြီးကြင်နာစွာသူမ၏အိမ်သို့ဖိတ်ကြားခဲ့သည် ငါလက်ခံခဲ့သည်စကားပြောနာရီစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်အဲဒီမှာနေ၏။ သူကအရမ်းဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးကျွန်မဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။ သူကကျွန်မကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မြန်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမဘယ်လောက်ကြာကြာကြိုးစားခဲ့၊ ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ပါစေကျွန်မကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ဒါကဂိမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူမသည်ငါ့ရည်းစားဖြစ်လိုပါကအစာရှောင်ခြင်းရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကို forward ကျွန်မသူမကိုမေးတယ်။ သူမသည်သူကလက်ခံနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ငါကိုတရားဝင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချိန်းတွေ့ငါ! ယခုကြှနျုပျတို့နီးပါးတစ်နှစ်အတူတကွဖြစ်ရပြီနှင့်အမှုအရာမဆိုပိုကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ငါ ED ကုသတက်အဆုံးသတ်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုကောင်းစွာလျှောက်တွင်ရယူပါ။ ဘဝတစ်ဖန်အဆမဲ့များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအပြည့်အဝခံစားရ၏။ 🙂
Porn စွဲ၏ 10 နှစ်, ED ၏5နှစ်, ပျက်စီး4ဆက်ဆံရေး။ အဘယ်သို့ငါကကျော်ရရှိရန်နိုင်ခဲ့သည်။
07 မှာ 17 / 2015 / 8: 43 ညနေ
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခြင်း
ဟေ့ကောင်လေးတွေခဏကြာပြီ၊ ငါကစိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းပါ။ ငါသာပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပို့စ်ဟောင်းအချို့ကိုဖတ်ပြီးကျွန်ုပ်မည်မျှရောက်ရှိလာသည်ကိုမစဉ်းစားဘဲမနေနိုင်ပါ။ ငါ PIED နှင့်တစ်နှစ်ခွဲကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာနှင့် 'မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်' ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အတိတ်ကာလကလိင်ဆက်ဆံရန်၊ ယုံကြည်မှုသုညမရှိ၊ စိုးရိမ်စိတ်များရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုများစွာသည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းစဉ်၌ရပ်နေသည်။ ငါသဘောပေါက်နားလည်ခြင်းမတိုင်မီကြာမြင့်စွာပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်ဟုရိုးရိုးသားသားစဉ်းစားမိသော်လည်းစိတ်ဓာတ်ကျလွန်းပြီး၎င်းကိုသိရန်စိတ်မရှည်ဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော့်မှာနံနက်စောစောထင်းအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ယခုကျွန်ုပ်ရည်းစားဖြစ်နေသောမိန်းကလေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့ကြုံအများဆုံးမရှိပါ။ ငါလိင်အပါအဝင်ဘဝ၌, အရေးကြီးသော / ပျော်စရာအရာတို့ကိုအာရုံစိုက်ဖို့စာသားအရမ်း freaked ခဲ့သည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာအချိန်မတန်မီ ehaculation, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း boners နှင့် crappy အတွေ့အကြုံများပြီးနောက်ငါနောက်ဆုံးတော့ဆွဲထားတယ်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ငါတို့တွေဟာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံပြင်းလာတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ငါကအခြားနေ့က5ကြိမ်ချွတ်တယ်! ကျွန်ုပ်၌ ED ပြzeroနာလုံးဝမရှိခဲ့ပါ၊ ငါ့အရင်စာမူတချို့ကိုမင်းဖတ်ခဲ့ရင်မင်းငါလိမ်နေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျချအေးဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကစားရန်နှင့်နမ်းခြင်းကိုခံစားပါ။ အပိုင်းတိုင်းကိုခံစားပါ။ ဖြေးဖြေးယူပါ ပြန်လည်သက်သာလာရန်ခံစားရရန်အတွက်သင်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါအပန်းဖြေသောအခါငါနံနက်သစ်သားပြန်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် viscous cycle တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဒစ်အလုပ်မလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်မည်သို့အနားယူနိုင်သနည်းဟုသင်မေးပေမည်။ ကျွန်တော့်အဖြေကငါ့ကိုယုံကြည်ဖို့ပဲ။ ငါအတိအကျတူညီလှေ၌ရှိ၏ ငါအားလုံးထွက်ရှာဖွေနေစဉ်ငါ့ gf ငါနှင့်အတူစိတ်ရှည်ခဲ့သည်။ ငါထင်တာကတော့ဒီမှာထင်မြင်ချက်လွဲမှားမှုတစ်ခုကမင်းဟာအမြဲတမ်းမင်းကိုချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူလာတဲ့အခါဒါမမှန်ပါဘူး။ ငါအခုလှုပ်နေတယ်လိုခံစားရတယ် သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိလျှင်သာဖြေဆိုနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြေပါလိမ့်မည်။
LINK - က Short နှင့်အမှတ်